अमेरिकी सरकार सटडाउनको असर भोलिदेखि, भिसा र पासपोर्ट सेवा के होला ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अमेरिकी सरकार सटडाउनको असर भोलिदेखि, भिसा र पासपोर्ट सेवा के होला ?
शुक्रबार मध्यरातदेखि अमेरिकी सरकार सटडाउन भएपनि त्यसको वास्तविक असर भने सोमबारदेखि अझ ब्यापक देखिनेछ । सोमबारदेखि झण्डै साढे ८ लाख कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य विदा दिइने भएकाले सटडाउनको असर त्यसपछि अझ ब्यापक हुनेछ ।
अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय अनतरगत ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले सटडाउनका कारण आफ्नो वेवसाइटमा अपडेट बन्द गरेको छ । वेवसाइट संचालन गर्ने कर्मचारीहरुलाई बिदा दिइएका कारण अपडेट बन्द गरिएको हो । तर आपतकालिन सुचना भने वेवसाइटमा अपडेट गरिनेछ ।
ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्स एक सुचना प्रकाशित गरी विश्वभर रहेका आफ्ना दूतावास र भिसा पोष्टहरुले भने भिसाको काम सुचारु राख्ने स्पष्ट पारेको छ । अमेरिका र अमेरिकाबाहिर भिसा सेवा सुचारु हुनेछ भने पासपोर्ट सेवा पनि जारी रहनेछ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्रालय अन्तरगतका कुन कुन गतिविधिहरु प्रभावित हुनेछन् भन्नेबारे विदेशमन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै स्पष्ट छैनन् । तर संघीय भवनहरुमा संचालित कामकाज प्रभावित हुने र विदेशमन्त्रालयका कैयन कामहरु ठप्प हुने अनुमान गरिएको छ । ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले भिसा र पासपोर्टका काम सुचारु गर्ने भएपनि अन्य विभागका काम भने प्रभावित हुनसक्नेछन् ।